Akwazi ukuba ungamamela kulo-Okthobha | IBezzia
UMaria vazquez | 07/10/2021 12:00 | Iindaba
Kule nyanga unethuba lokuva okokuqala ngqa iialbham ezintsha zegcisa elihle lamagcisa. E-Bezzia asinakubakhankanya bonke, ke senze ukhetho oluncinci lwamagcisa ama-6 okanye amaqela ndikhuphe okanye siza kukhupha icwecwe elitsha kule nyanga. Yeyiphi ofuna ukuyiva?
1 Emazantsi entlambo - Quique González
2 Yonke iya kuba nengqondo ekugqibeleni-uJames Arthur
3 Ishumi elinesixhenxe lihamba ngaphantsi - uSam Fender
4 Umlambo kunye nelitye - uMorgan
5 Amawakawaka amadabi - Malú
6 Iibhendi eziluhlaza-uLana del Rey
Emazantsi entlambo - Quique González
Ngo-Okthobha 1, Okthobha XNUMX wabona ukukhanya kwecwecwe elitsha likaQuique Gonzalez: Sur en el valle. Ingqokelela ye Iitraki ezili-12 zobume obukhoyo obukhoyo, ngubani orekhodile ejikelezwe ziimvumi eziqhelekileyo ezinje ngeToni Brunet (imveliso kunye neekatala), uJacob Reguilón (bass), uEduardo Olmedo (amagubu) kunye noAlejandro Climent (ipiyano).
Iileta ziphinde zatyikitywa uQuique González Ngaphandle kwe "Ayisiyonyani" nguKirmen Uribe. Ikhutshwe yileyibhile yeCultura Rock Records, ibonisa ukwahlulwa kwamalungu kaMorgan: David Schulthess "Chuches" (Hammond noWurlitzer) noCarolina de Juan (amazwi axhasayo). Ukusuka kwicwecwe sele sikwazi ukumamela Ungandimela kumera noJade, nevidiyo onokuyonwabela apha ngezantsi.
Yonke iya kuba nengqondo ekugqibeleni-uJames Arthur
Kuya kufuneka ulinde kude kube ngomso ukuva ukuba konke kuya kuba nengqondo ekugqibeleni, icwecwe lesine likaJames Arthur. Ingqokelela yeengoma ezili-14 nge Amayeza njengowokuqala, Esikwazileyo ukuva ngoSeptemba, iAvalanche kunye noEmily.
I-albhamu ithathe indawo ekhaya, nabantu abambalwa, nto leyo eye yamvumela ukuba abe sesichengeni ngakumbi kunangaphambili. Emva kokuthengisa ngaphezulu kwe-30 yezigidi zeerekhodi ngeeprojekthi zakho zangaphambili, ngaba le projekthi iya kuphinda ilukuhlise uluntu?
Ishumi elinesixhenxe lihamba ngaphantsi - uSam Fender
Ilishumi elinesixhenxe ukuya ngaphantsi ngu I-albhamu yesibini kaSam Fender. Ikhutshwe yiRekhodi yePolydor, icwecwe larekhodwa eNorth Shields kwaye laveliswa nguBramwell Bronte, njengoko wayenomdla wakhe wokuqala, imijukujelwa yeHypersonic (2019). Iya kuba yenye yee-albhamu eziza kukhutshwa ngomso, nangona sele ungazithenga kuwo onke amaqonga.
Malunga neli cwecwe litsha uSam Fender uthe: «Kukuza kwebali lobudala. Imalunga nokuba mdala. Ngumbhiyozo wobomi emva kobunzima, kunye nokubhiyozela ukusinda. Umkhondo onika i-albhamu igama lakhe usebenze njengowokuqala umboniso. Emva koko kweza u-Aye kwaye wehla.
Umlambo kunye nelitye - uMorgan
Ngo-Okthobha i-15, Umlambo kunye nelitye, i I-albhamu yesithathu kaMorgan, Ingqokelela yeengoma ezili-10 apho baqala khona ukusebenza emva kokuvalelwa nguCovid-19, nefilosofi efanayo njengesiqhelo: "thatha izimvo ezimbalwa kwaye ucofe kunye nabo uzama ukuphonononga imeko, iikhonsepthi kunye nezandi kancinci."
Phantse unyaka wonke wokusebenza, ekuqaleni kuka-2021, iqela laseSpain lashicilela iingoma kwi Isitudiyo seLe manoir de Léon eFrance. Ngokuveliswa nguCampi Campón, uxutywe nguStuart White eLos Angeles, kunye noColin Leonard eAtlanta, icwecwe laboniswa kunye noNgedwa njengendawo yokuqala, elandelwa nguMlambo.
Amawakawaka amadabi - Malú
Enye ye-albhamu oza kuthi umamele kule-Okthobha iya kuba nguMil Batallas, icwecwe leshumi elinambini elilindelweyo nguMalú. Iya kuba nge-Okthobha ye-22 xa lo msebenzi mtsha uthengiselwa umculi waseSpain usebenze nomvelisi uPablo Cebrián. "Ingoma nganye idabi, idabi ngalinye umzuzu wokuziva kwaye uphile ...", uphawule umculi malunga neprojekthi.
Imfihlo yamazwi yayingumboniso wokuqala wealbham emva koko yeza ingoma enika ialbham igama layo. Okubandakanyiweyo kulo msebenzi kukwaluka iiWings njengengoma yebhonasi, ingoma ekhutshwe nge-29 ka-Epreli 2020 ngexesha lokuqalisa kwesifo sikaCovid-19, apho wabonisa khona ukuba ngumama kwakhe ngelo xesha. Ukongeza, i-albhamu iya kubandakanya undwendwe olukhethekileyo, uMario Domm Ukusuka kwiqela laseMexico iCamila, eliza kuhamba naye emva kwesaqhwithi.
Iibhendi eziluhlaza-uLana del Rey
Iblue banisters yi I-albhamu yesibini kaLana Del Rey kule 2021 emva Chemtrails ngaphezulu kweklabhu yelizwe. Ngomhla we-20 kaMeyi, ngo-2021, kwakhutshwa iingoma ezintathu njengomboniso womsebenzi omtsha: iiBlue banisters, Incwadi yokubhaliweyo kunye nomlilo wasendle weWildflower. Ezimbini zokuqala zadityaniswa noGabriel Edward Simon, eyokugqibela eqanjwe nguLana Del Rey noMike Dean okwangumvelisi wale ngoma. Kwiinyanga ezimbalwa kamva, ngoSeptemba 8 Arcadia wakhululwa.
Ngokuhambelana nenkulumbuso yeArcadia, umzobi uphawule wathi: «Ndicinga ukuba unokuthi le albhamu imalunga malunga nokuba bendinjani, kwenzeke ntoni kwaye ndinjani ngoku. Ukuba unomdla, buyela umva uye kumamela iingoma ezintathu zokuqala endizipapashileyo. Babalisa ngesiqalo. Le ngoma idlala kwindawo ethile phakathi kwaye xa irekhodi liza, uya kuva ukuba sikuphi namhlanje. Nangona ukugxeka okuqhubekayo bekuzama, ubuncinci kundityhalele ukuba ndiphonononge owam umzi wosapho, ndimbe nzulu, kwaye ndiqhubeke nokungqina inyani yokuba uThixo ukhathalele indlela endihamba ngayo emhlabeni. Kwaye ngaphandle kwako konke ukuthandabuza okubonisa ubuthathaka kunye neenkcazo ezingenangqondo zokungabonisi uxanduva ngokubanzi, kufuneka nditsho ukuba ndikonwabele ukuhamba kwihlabathi ngokumangalisayo, njengomfazi onobabalo nesidima. Enkosi kubahlobo bam kule minyaka ili-18 idlulileyo abaye bangumzekelo wokutsala, hayi ukunyusa umgangatho. Zange khe ndizive ndinesidingo sokuzazisa okanye ndibalise ibali lam, kodwa ukuba unomdla, eli cwecwe liyayixela kwaye ayenzi enye into.
Khumbula, zonke ezi albhamu unokumamela phambi kokuphela kuka-Okthobha. Uza kuqala ngomphi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » Iirekhodi onokuthi umamele kule-Okthobha
Uyibuyisela njani inyathelo elidala elinxitywayo